fisafoaky Rhino | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
Raging Rhino Slot dia mifototra amin'ny foto-kevitra biby Afrikana. WMS Gaming dia tonga amin'ny iray somary hafa karazana slot izay manome endri-javatra sasany tsy manam-paharoa. Ny zavatra voalohany izay ho avy ny filazana fa manana dia enina reels fa tsy fitsipika dimy. Beautiful Afrikana bibidia tany efa natao tao amin'ny fototra izay tohanan'ny sasany tena tsara tarehy marika famantarana voatsoaka dia teny an somary 3D fomba. Noho izany, izany rehetra izany dia afaka hita ao reels efatra toerana samy hafa, izay manolotra fomba maro mba handresy.
fisafoaky Rhino vonona eny an-tsaha
fisafoaky Rhino manolotra enina reels miaraka amin'ny efatra andalana ny tandindona sy 4096 fomba samihafa mba handresy. Mba handresy, tsy maintsy manao ny voafaritra nandresy ny tsikombakomba eo amin'ny mifanila reels. Ny fototra talaky masoandro amin'ny resahana miaraka amin'ny mozika feo feno biby dia tena hitarika anareo etỳ nankany an'ala tany.
Ny lalao dia manana baboon, ny mongoose, ny alligator ary rhinoceros toy ny havoana marika Sarobidy kosa ny ambany ireo karatra mahazatra no fanehoana an'ohatra 9, 10, J, Q, K sy A.
Ny bibidia dia marika aseho amin'ny alalan'ny masoandro toerana tsara tarehy ao ambadiky ny hazo Afrikana sy hita tsapaka amin'ny reels roa, telo, efatra ary dimy. Mety hisolo rehetra marika hafa afa-tsy ny famantarana izay tombony lehibe diamondra mamirapiratra ary no nahatonga an'ilay bibidia ny tombony ho an'ny endri-javatra. Ny Rhino marika ambony indrindra mandoa ny vola ary afaka ho hita stacked rehetra ny reels.
Free spins no hany tombony natolotra amin'ny fisafoaky Rhino. Tsy azo mora foana ka vao niteraka isan-karazany ireo karazana Diamonds amin'ny reels. Na dia tokony ho telo, fara fahakeliny, isa mba miteraka ny kely indrindra tombony ho anareo izay valo spins, efatra Diamonds, etsy ankilany, dimy ambin'ny folo no hanome anareo spins, mandoa avy dimy amby roa-polo sy enin-diamondra spins manome spins dimam-polo izay no ambony indrindra eo amin'ny lalao. Raha toa ianao ka afaka hanangana fandresena miaraka amin'ny bibidia mariky, dia maro ny Fandresena amin'ny 2x na 3x.
fisafoaky Rhino dia malaza slot ary nahazo ny antonony mpankafy-manaraka ho azy hatramin'ny andro voalohany. Manolotra ny ambony indrindra ny fandresena 12,000 izay matetika no manintona ny olona mba hanome azy ny hira. Na dia misy mahita azy mpilalao aina kokoa ny mahazatra payline rafitra, olon-kafa no mbola hankafy ny fiovaovana eo amin'ny lalao slot ity.